I-China Aluminium Round Standoffs, Threaded Round Standoffs, I-Aluminium Signoffs emiBhayo kunye noMboneleli
Inkcazo:I-Aluminium Round Standoffs,I-Standound Round Threaded,I-Aluminium Signoffs esayiniweyo,Ukujikeleza okumjikelo,,
Home > Imveliso > I-Standoffs ezenziwe ngokwezifiso > IAluminiyam Round Standoff
Iintlobo zeMveliso ze- IAluminiyam Round Standoff , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-Aluminium Round Standoffs , I-Standound Round Threaded ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Indoda kwibhinqa hex iskreyi standoff m3 nylon
I-OEM kunye ne-ODM i-Aluminium Knoffled Standoffs Round Standoffs
Iimveliso ezintsha ezishushu ezishushu ze-aluminium standoff
Imibala e-Quadcopter enemibala emi-M3x5.0x25mm yeAluminiyam emi
umbala obuhle be-aluminium yeposi emeyo M3
i-anodised sign standoff yabasetyhini enziwe umtya
aluminium ijikelezi yeglasi ukuma
I-CNC Ukuguqula i-Duplex Aluminium Alloy Anodize Thread Knoffled Standoff
umjikelo ojikeleze nge-aluminium odityanisiweyo we-spacer standoff
Jikeleze iNyathelo lentloko yabasetyhini e-Aluminium Standoff
Packaging: Ingxowa ye-pp + ibhokisi
Umzi-mveliso we-Shenzhen aluminium M3 isiciko se-bolt Hobbycarbon Isikali se-Hobbycarbon Aluminium sithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya, amandla aphezulu kunye nemibala emihle edityanisiweyo kwintengiso. Nantsi i-aluminium iqhosha...
Muti-umbala wesiko le-aluminium yomjikelo wokuma Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho ukusilela okuphakathi...
eyindoda ukuya kwindoda engu-M3 aluminium eqengqelekayo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho ukusilela...
Umbala okhethekileyo wesilisa i-aluminium kwibhinqileyo yabasetyhini Inkcazo yeMveliso : Isitayile sethu se-aluminium ukuma kwesitayile sobabini siphela ngentambo. Ukuba umthengi akafuneki eme ngentambo, sinakho ukwenza ngokwezifiso. Iyamelana...
Umxube we-aluminium ejikeleze i-spacer standoff Inkcazo yeMveliso : Isitayile sethu se-aluminium ukuma kwesitayile sobabini siphela ngentambo. Ukuba umthengi akafuneki eme ngentambo, sinakho ukwenza ngokwezifiso. Iyamelana ne-corrosion kwaye...
Ixabiso lento: USD 0.19 / Bag/Bags
Packaging: Ingxowa yeplastiki + ibhegi yebhokisi
Amandla okubonelela: 100000
Umbala we-aluminium entle yombala ojikeleze ispacer Inkcazo yeMveliso : Isitayile sethu se-aluminium ukuma kwesitayile sobabini siphela ngentambo. Ukuba umthengi akafuneki eme ngentambo, sinakho ukwenza oko. Iyamelana ne-corrosion kwaye ayisiyiyo...
Indoda kwibhinqa hex iskreyi standoff m3 nylon Intshayelelo ka-Standoff : Sobabini ukuma okumile -i-hex okanye imilo ejikelezileyo. Ingenziwa nge- aluminium , intsimbi engagqwanga, okanye i-nylon, kwaye inokuba nesitayela somzimba wesilisa okanye...
Indoda kwibhinqa hex iskreyi standoff m3 nylon Intshayelelo ka-Standoff : Ngokwesiqhelo, ii-aluminium standoffs zidlala indima yokuxhasa. i t kungenziwa edibene 2 iipleyiti carbon, ne ngezikhonkwane macala omabini, ukuba ibe yonke. Ngenxa...
I-OEM kunye ne-ODM i-Aluminium Knoffled Standoffs Round Standoffs Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho...
Umjikelo we-Cylinder oyiCound Brass Standoff Spacer Yintoni iresiphi? Iipleyiti ezisetyenzisiweyo ngokubanzi ezisetyenziselwa ngezikrelem.it zinentambo kumacala omabini endlela, xa usikrola ephepheni, izinto ezintathu zinokwenza iphelele....
Ingcaciso yeMveliso I-M3 anodized ejikeleze i-aluminium ekumeleni iHelikopta Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya....
Ingcaciso yeMveliso Iimveliso ezintsha ezishushu ezishushu ze-aluminium standoff Yintoni iresiphi? Iipleyiti ezisetyenzisiweyo ngokubanzi ezisetyenziselwa ngezikrelem.it zinentambo kumacala omabini endlela, xa usikrola ephepheni, izinto ezintathu...
KwiChina IAluminiyam Round Standoff Abaxhasi
I-Aluminium roundoffs ijikeleze imilo ejikelezileyo, yona ixhaphakileyo kwaye iyathandwa.
Ubungakanani obumiselweyo, ubume kunye nombala ziyafumaneka.Izona ntlobo zidume kakhulu, M3x10mm, M3x15mm, M3x20mm, M3X25mm, M3X30mm, M3X35mm ubude ujikeleze ii-standoffs njlnjl, zihlala zizitokhwe, ezinokuhanjiswa ngexesha.
Umbala wokurejista: mnyama, ubomvu, luhlaza, blowu, pinki, luhlaza, isilivere ,orenji, igolide.
I-Aluminium Round Standoffs I-Standound Round Threaded I-Aluminium Signoffs esayiniweyo Ukujikeleza okumjikelo Aluminium Round Standoffs